ပြည်တွင်းတွင် ရောင်းချရန် တိုယိုတာအဲယ်ဖတ်ခ်ျများ | တိုယိုတာအဲယ်ဖတ်ခ်ျကားဈေးများ Carmudi Myanmar [Burma]
A/C: Front (82)
A/C: Rear (63)
Cassette Radio (82)
Lks 477 ညှိနှိုင်း
Lks 375 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Alphard 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Silver Toyota Alphard 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Pearl White Toyota Alphard 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Lks 435 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Alphard 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 289 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Alphard 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Lks 570 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Alphard 2006 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်မျာ...
Lks 373 ညှိနှိုင်း
Lks 297 ညှိနှိုင်း
Lks 359 ညှိနှိုင်း
Light green Toyota Alphard 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစန...
Lks 427 ညှိနှိုင်း
Lks 420 ညှိနှိုင်း
Lks 2,850 အစိုးရအခွန်အခများပါဝင်ပြီး
အမည်ပေါက်အပြီးအစီးဖြင့် Top speed Auto service မှာ 2017 ထုတ် Brand new ကား Toyota Alphard ယခု ရုံးသို့လာရောက်ကြည့်ရှုဖို 09797966888 ကို့ ကြိုတင်ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်. 2017 Toyota Alphard Executive Lo...
Lks 495 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Alphard 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Lks 393 ညှိနှိုင်း
မိသားစုကားများ အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ် များ
မော်တော်ဟုမ်းကား လိုလည်း လူသိ များကြတဲ့ တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ်တွေကို လည်းပြည်တွင်းမှာ တော်တော်များများ အသုံးပြုလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၇ယောက်၊ (သို့) ၈ ယောက် အထိ စီးလို ရတဲ့အတွက် မိသားစု များ စီးနင်းဖို့ အဆင်ပြေတဲ့ ကားတစ်ခု အဖြစ် စဉ်းစားလာကြပါတယ်။ နယ်တွေ ဖက်မှာ လည်း အ၀ယ်လိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်.။ မီနီ ဗန်ကား တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ အတွက် နေရာ အနေအထားနဲ့ ပါကင်ထိုးမူမှာ နေရာ အတော် အတန်တော့ စားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ ဗယ်ဖိုင်ယား လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။
အနောက်က ပစ္စည်း တင်ရဖို့ သတ်သတ်ကြီး နေရာ မပေးထားပေးမဲ့ အနည်း အကျဉ်း ထည့်လို့ ရပါတယ်။ အတွင်း ခန်းမှာ ရှေ့နောက် နှစ်လုံးစီ ထိုင်ခုံ (၃) တန်း တွေ့ရမှာပါ။ ဂရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီး အတွင်းက ကျွန်းခွက်တွေ ပါရှိမူ မပါရှိမူ ကွာပါတယ်။ တော်တော်များများမှာ တော့ တီဗီတွေ ပါတာကို တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ချို့ အော်ရီ ဂျင်နယ် မဟုတ်ဘဲ ဒီမှာ ပြန်ထည့်ထားတာတွေ လည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ခု သတိထားဖို့ ရှိတာက ကားရဲ့ အောက်က ရှဲ တွေက အတော်အတန် နိမ့်လွန်တာမို့ လမ်းကြမ်းတွေ၊ ဂမူ့တွေနဲ့ ချိုင်းတွေကို ဖြတ်တဲ့ အခါမှာတော့ တော်တော် ဂရုထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှဲတွေ ရဲ့ အနိမ့် အမြင့်ဟာ ကားမော်ဒယ်ကို လိုက်ပြီးတော့လည်း ထပ်ကွာပါသေးတယ်။
ပြည်တွင်း တိုယိုတာ အဲလဖတ်
ဇိမ်ခံ မီနီဗန် အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ်ကို ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကတည်းက စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ် ဂျီ ၊ တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ် ဗီ၊ တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ် ဟိုင်းဘရစ် စတဲ့ မော်ဒယ် (၃) လိုင်းမှာ ၂.၄ လီတာ၊ ၃.၅ လီတာ စတဲ့ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင်တွေနဲ့ ရနိင်ပါတယ်။ ဟိုင်း ဘရစ်ကိုတော့ ၂.၄ လီတာ ဓာတ်ဆီ အင်ဂျင် သုံးပြီး ဟိုင်းဘရစ် လျှပ်စစ် မော်တာ ဘတ္တရီနဲ့ သုံးပြီး တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ တိုယိုတာ ဗယ် ဖိုင်ယားလို့ ခေါ်တဲ့ လူငယ်များ အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ အဲလ်ဖတ် ဗားရှင်းကိုလည်း ထုတ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ်မှာ ပထမ မျိုးဆက်နဲ့ ဒုတိယ မျိုးဆက်ဆိုပြီး မျိုးဆက် နှစ်ခု ရှိပါတယ်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၀၇ ထိ နဲ့ ၂၀၀၇ ကနေ ယနေ့ အထိ ဖြစ်တဲ့ မော်ဒယ်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာတော့ စလစ်နဲ့ သွင်းရတဲ့ ၂၀၀၂ ၊ ၂၀၀၃ ကနေ ၂၀၀၈ လောက်ထိ အရောင်း အ၀ယ် များကြပါတယ်။
အော်တို၊ ဓာတ်ဆီ သာ လာပါတယ်။ နောက်ပြီး ဟိုင်းဘရစ် လာပါတယ်။ ရှေ့ဘီးမောင်းနဲ့ လေးဘီးယက် စနစ်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ အင်ဂျင်ကတော့ ၂.၄ လီတာ နဲ့ ၃.၀ လီတာ ဆိုပြီး ၂၀၀၇ မတိုင်ခင်မှာလာပြီး ၂၀၀၇ ကျော်မှာတော့ ဂီယာ ၇ချက်ကနေ ၈ ချက်ထိ ဖြစ်သွားပြီး ၂.၄ လီတာ၊ ၃.၅ လီတာ ဆိုပြီး အင်ဂျင် အနည်းငယ် ပိုကြီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီမီယံ အဆင့် ရှိတဲ့ မားတီး ပါပို့စ် ဗန်ကြီးတွေ ဖြစ်ပြီး အမြင်လှပ မှုကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ထည် အရွယ်အစားကြီးမားပေမဲ့ လောင်စာစား သက်သာတဲ့ ကားတွေအဖြစ်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။. အင်ဂျင်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ နေ့စဉ် အသုံးပြုမှုတွေမှာ ကိုက်ညီပြီး ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရာမှာလည်း အကုန်အကျ သက်သာပါတယ်။ တိုယိုတာအဲလ်ဖတ် တွေဟာ ကြီးမားတဲ့ ဇိမ်ခံ မားတီးပါပို့စ် ဗန်ကြီးတွေ ဖြစ်ပြီး မိသားစုတွေကို နေရာ အရွှယ်အစားကျယ်ကျယ် ၀န်းဝန်း ဖြင့် အဆင်ပြေစွာ စီးနင်းနိုင်အောင် ကူညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယမျိုးဆက် ဖြစ်တဲ့ ၂၀၀၈ ကနေ စတဲ့ မျိုးဆက်က ပိုပြီး အတွင်းဖက်တွေနဲ့ အပြင်ဖက်တွေမှာ ပိုပြီး စတိုင်ကျပြီး ဇိမ်ခံကား ပုံစံ ပိုပေါက်ပါတယ်။ ထို မျိုးဆက်တွင် တိုယိုတာက အဲလ်ဖတ်နဲ့ ဗယ်ဖိုင်ယား ဆိုပြီး ထုတ်ပါတယ်။ တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ်ရဲ့ ပထမတန်းစားလို့ပြောလို့၇တဲ့ ဟိုက် ဘရစ် အဲလ်ဖတ် တွေမှာ ဒီဇိုင်း ပိုမို ဆန်းသစ်မှု တစ်ရပ်ကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းက ဂီယာ အုံရှိ ကျွန်းခွက်တွေကအစ ပြောင်းလဲပြီး အတွင်းခန်း လူစီးနင်းမှုမှာ အနောက်ဆုံးက ၃ယောက်တန်း နဲ့ ကျန်တဲ့ အရှေ့တန်းတွေကတော့ နှစ်တန်းဆီ ဖြစ်ပါတယ်။ အလယ်က ကော်ဖီ ခွက်တင်တဲ့ တန်းတွေနဲ့ ခြေတင်တဲ့ တန်းတွေကအစ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ပိုင်း အနေနဲ့ ရှယ်တွေ ပါရှိမှု ၊ သံဇကာ အရစ်တွေက အစ ကွဲခြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ အဲလဖတ်တွေမှာ ပါဝါ လောခ်၊ ပါဝါ စီတာယာရင်၊ အလိုင်းဝှီး၊ ပါဝါ ဆလိုက်ဒေါ့ခ်စတဲ့ အဆင်မြင့် အစအပိုင်းများ များစွာပါဝင်ပါတယ်။ အောက်က ရှဲလ်တွေမှာ နည်းနည်း နိမ့်တတ်ကြလို့ ရှဲလ်နဲ့ မြေပြင် များစွာ လွတ်တဲ့ တိုယိုတာ အဲလ်ဖတ်တွေကို များစွာဝယ်ကြပါတယ်။ လူစီး များများ ဆန့်တာရယ်၊ ဒီဇိုင်းနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တာရယ်။ တီဗီ ပါရှိတာရယ်တို့ကြောင့် လူဝယ်များပါတယ်။ အချို့ မော်ဒယ်တွေမှာတော့ ဆန်းရုတွေကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားဂရိတ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးက ကျပ် သိန်း ၂၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ၂၅၀ သိန်း ~ ၃၀၀ ကျော် ထိ ရှိပါတယ်။ စလစ်နဲ့ အသွင်းများပါတယ်။ ဒီအတိုင်းသွင်းရင် အခွန်က ဒေါ်လာ ၂၂,၀၀၀ ပေါ်မှာ ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းလေလံမှာပေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက လည်းကောင်း၊ ၇ိူးရွန်နဲ့ ကား အရောင်းတန်းတွေက ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုယိုတာ အဲလဖတ်တွေဟာ ကိုယ်ထည် အရွယ်အစားကြီးမားသလို လူများများလည်း ဆန့်နိုင်ပေမဲ့လို့ ယခု ပြည်တွင်း လက်ရှိ လမ်းများ အခြေအနေတွေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ပါကင်အတွက် နေရာ အတန်ငယ်စားတွေ ကားတွေ ဖြစ်ရုံကလွဲလို့ အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေလှတဲ့ ကားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။